Wararka Maanta: Axad, Apr 8 , 2012-Taliska AMISOM oo soo bandhigay shax cusub oo afar saldhig oo waaweyn ay uga sameysanayaan Soomaaliya
Taliska AMISOM oo soo bandhigay shax cusub oo afar saldhig oo waaweyn ay uga sameysanayaan Soomaaliya Axad, Abriil 08, 2012 (HOL) — Taliyaha ciidamada AMISOM, Jen. Fred Mugisha oo wareysi siiyay BBC Arabic ayaa sheegay in ciidamadooda ay bilaabeen markii ugu horreysay muddo afar sano ah inay ka howlgalaan meel ka baxsan Muqdisho.
Jen. Mugisha wuxuu sheegay in la dajiyay qorshe cusub oo ay Afar saldhig oo waaweyn ay uga sameysanayaan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, isagoo sheegay in saldhiggooda koowaad uu noqonayo Muqdisho, saldhigga labaad Baladweyne, saldhigga saddexaad Jubbooyinka iyo saldhigga afaraad oo ay ka sameynayaan gobollada Bay iyo Bakool.
"Saldhigyadan waxaa xukumi doona saraakiil ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Jabuut, Kenya iyo Sierra Leone," ayuu yiri Jen. Mugisha. "Waxaan 100 askari oo ka tirsan ciidamadeenna geynay markii ugu horreysay Baydhabo si ay uga howlgalaan."
Ciidamadooda la geynayo gobollada dlaka ayuu sheegay inay ka qaybqaadanayaan sidii lagu soo celin lahaa ammaanka guud ee Soomaaliya kaddib muddo 20-sano ah oo ay dagaallo ka socdeen.
"Xoogaggeenna kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxay qorsheynayaan inay Al-shabaab ka saaraan gobollada dalka oo dhan. Waxaana rumeysannahay in taasi ay dhacayso," ayuu taliyaha AMISOM u sheegay BBC-da qaybteeda afka Carabiga.
Taliyuhu wuxuu sheegay inay ciidamadooda kala wareegayaan ciidamada Itoobiya goobaha ay ka saareen Al-shabaab, isagoo xusay in Itoobiya aysan ka mid ahayn ciidamada AMISOM, balse uu ka dhexeeyo xiriir wadashaqeyneed.
Hadalka taliyaha ayaa imaanaya iyadoo afhayeenka Al-shabaab uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmooyinkii horay looga qabsaday ee ku yaalla Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onilnemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Axad, Abriil 08, 2012 (HOL) — Shirweynihii urur siyaasadeedka WADANI, ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaaladda Hargeysa,gaar ahaanna Hoolka weyn ee hotel Maansoor. Madaxweynaha Somalia oo sheegay in Qaraxii Tiyaatarka uu ku yimid khalad ka dhashay Qabanqaabadii Xaflada 4/8/2012 8:01 AM EST
Axad, Abriil 08, 2012 (HOL) — Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku sugan degmada Baydhabo ee gobolka Bay iyo ra'iisul wasaare C/weli Maxamed Cali oo isna ku sugan Muqdisho ayaa waxay ka tacsiyeeyeen geeridii ku timid xildhibaan Mowliid Macaani Maxamuud. Safaaradda Somalia ee Liibiya oo shaacisay Magacyada Tahriibayaal ku dhintay Badda u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga 4/8/2012 6:51 AM EST
Axad, Abriil 08, 2012 (HOL) — Toddoba ruux oo lix ka mid ah ahaayeen haween ayaa ku geeriyooday dooni ay tahriibayaal Soomaaliyeed la socdeen oo cilladi ay ku qabsatay badda u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga. Masuuliyiintii u xir-xirnaa Musuqmaasuqa oo Cuntadii ka soomay iyo Boqor Buurmadow oo Rumaan sii hayna loo jaray 4/8/2012 6:35 AM EST